Shiinaha Cadaadis Warshadda Khatarta Xasaasiga ah iyo alaab-qeybiyeyaasha. 名 / 公司 名
Cadaadis Liner Khatimidii Xasaasi ah
Khadku wuxuu ka kooban yahay walxaha xumbada leh oo leh dahaadh tayo sare leh oo xasaasi ah. Khadadkaan waxaa sidoo kale loo yaqaannaa hal-xariijin. Waxay ku siisaa shaabad adag oo leh dhejiska weelka cadaadiska oo keliya. Iyadoo aan lahayn shaabad iyo qalab kululeyn. sida shaashadda dhalada kulul ee dhalaalka kulul, waxaa loo heli karaa dhammaan noocyada weelasha: caagagga, dhalooyinka iyo weelasha birta. Laakiin looma qorsheynin guryaha caqabadaha, saameyntu way ka yar tahay tii hore, sidaas darteed waxaa lagula talinayaa in loo isticmaalo alaab budo ah oo adag, sida cuntada, qurxinta iyo alaabada daryeelka caafimaadka.
Xadhig Cadaadis Xasaasi ah
Khadku wuxuu ka kooban yahay walxaha xumbada leh oo leh dahaadh tayo sare leh oo xasaasi ah. Khadadkaan waxaa sidoo kale loo yaqaannaa hal-xariijin. Waxay ku siisaa shaabad adag oo leh dhejiska weelka cadaadiska oo keliya. Iyadoo aan lahayn shaabad iyo qalab kululeyn. sida dhalada kuleylka kuleylka kuleylka kuleylka kulul, ayaa loo heli karaa dhammaan noocyada weelasha: caagagga, dhalooyinka iyo weelasha birta. Laakiin looma qorsheynin guryaha caqabadaha, saameyntu way ka yar tahay tii hore, sidaas darteed waxaa lagula talinayaa in loo isticmaalo alaab budo ah oo adag, sida cuntada, qurxinta iyo alaabada daryeelka caafimaadka.
Cadaadiska Xasaasiga ah ee Cadaadiska waa hal shey, oo alaab dib loo isticmaali karo. Waxay ka kooban tahay polystyrene xumbo leh oo hal dhinac ku dahaadhan cadaadis xasaasi ah oo xasaasi ah. Safka ayaa xirxiraya weelka ka dib marka dhalada si adag loo adkeeyo.
Qaab dhismeed ahaan la mid ah safka xumbada, khadadka xasaasiga ah ee cadaadiska leh waxay ku dhegan yihiin hal dhinac, oo loogu talagalay inay ku dhegaan qarka weelka. Marka weel la xiro oo cadaadis la saaro koofiyadda (iyo markiisa, safka), koollada ayaa dhaqaajinaysa, taas oo abuuraysa shaabad.
Cadaadiska khadadka xasaasiga ahi waxay bixiyaan difaac dheeri ah oo ah inay runti abuurto shaabad ku dhagan qarka dhalada. Khatimayaasha cadaadiska looma tixgeliyo inay yihiin nooc ka mid ah shaabad caddeyn ah. Si fiican ugama shaqeeyaan dareerayaasha, gaar ahaan saliidaha. Waxay mararka qaarkood ku shaqeyn karaan cabitaanno qaro weyn sida kiriimyada iyo suugada.
Wax cayriin: Foomka PS + Cadaadiska Cadaadiska-Xasaasiga ah
Lakabka daboolka: PS
Dhumucdiisuna waxay Standard: 0.5-2.5mm
Waxaan aqbalnaa cabbirka iyo baakadaha la habeeyay
Shaabadaynta iyada oo aan mishiinno lahayn.
Wax soo saarka 1.Dry
2. Cunto / budo qallalan
Waxyaabaha Saamaynta ku leh shaabadaynta
Cadaadiska gaarka ah ee dusha sare ee wax lagu xiro: xoogga caadiga ah ee dusha sare ee qeybta taabashada inta udhaxeysa dusha sare waxaa lagu magacaabaa cadaadis gaar ah. Cadaadiska gaarka ah ee dusha sare ee shaabadu waa qodob muhiim ah oo saamaynaya waxqabadka xiritaanka goomaha ama xirxirida. Caadi ahaan, cadaadis gaar ah ayaa lagu soo saaraa dusha sare ee xarkaha iyadoo la adeegsanayo xoogga xoojinta ee hore, taas oo ka dhigaysa shaabadu inay xumaato, si loo yareeyo ama looga takhaluso farqiga u dhexeeya dusha xiriirka xirmooyinka iyo ka hortagga dareeraha inuu soo dhex maro, si loo gaaro ujeedka shaabadaynta. Waa in la tilmaamaa in saameynta cadaadiska dareeraha ay beddeli doonto cadaadiska gaarka ah ee dusha sare ee daboolka. Kordhinta cadaadiska gaarka ah ee dusha sare ee wax lagu xidho waxay faa'iido u leedahay xiritaanka, laakiin waxaa ku xaddidan xoogga isugeynta ee qalabka wax lagu xiro; shaabadda firfircoon, kororka cadaadiska gaarka ah ee dusha sare ee xirashada ayaa sidoo kale sababi doona kororka u dhigma ee iska caabinta khilaafaadka.
Hore: Khatimidii xabagta
Xiga: Safka Xumbo